Ogaden News Agency (ONA) – Gabdhaha Ogadenya Waa Hormuudka Halganka – Dhagaysta oo Aamiin Dhaha ..
Gabdhaha Ogadenya Waa Hormuudka Halganka – Dhagaysta oo Aamiin Dhaha ..
Posted by ONA Admin	/ September 9, 2014
Sida aan lawada socono gabdhaha ree Ogadenia waxay halganka shacabka Ogadenia uu kula jiro gumaysiga la factirsaday ee Ethiopia ka galeen kaalin mugwayn oo aan ladhayalsan Karin. Waxay gabdagha Ogadenia halganka ka kabeen boosas badan oo muhiim ah waxayna taariikhdu xustay gabdho iyo hooyooyin qaali ah oo baal dahab ah ka galay ladagaalanka gumaysiga Abisiinya.
Waxaan wada garanaynaa siyaabaha kala duwan ee ay gabdhaha Ogadenia udagaalamaan dal iyo dibadba waxayna caan ku noqdeen dadaalka ay gudaha ka wadaan ee ay biyaha iyo baadkaba wiilasha diriraya ula garab taagan yihiin. Waxaa kale oo ay gabdhaha Soomaalida Ogadenia qaateen qoriga iyagoo u gudbay kaalintii ay ragu lahaayeen kadib markay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka joogtada ah ee uu gumaysigu kuhayo shacabka biri ma gaydada ah ee aan waxba galabsanin.
Sidoo kale waxaan ognahay suugaanta xabada ka kulul oo ay dhankooda kamiisayaan iyagoo adeegsanaya afkooda haday noqoto buraanbur, gabay, heeso iyo dhaanto. Waxayna caan ku noqdeen guubaabada iyo gabayada kicinta hanbalyada iyo habaarkaba isugu jira. Miyaa la iloobi kara Raada Afjanno iyo kaalinta ay kaga jirto suugaanta halganka.
Waxba yaana hadal idinku daalinine waxaan maanta idiin hayaa mid kamid ah gabdhihii baroomada loo yaqaanay oo inooo haysa gabay iyo buraanbur ay kala haydayso CWXO iyo shacabwaynaha Ogadenia ba waxayna salaan iyo hambalyaba hawada u marinaysaa madaxda JWXO, Jaaliyaadka iyo CWXO waxayna sigaar ah u salaamaysaa ulana dardaarmaysaa CWXO. Gabadhan oo ay Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ku booqatay gurigeeda ayaa codsatay in dhambaalkeeda la gaadhsiiyo cida ay ula danleedahay. Dhagaysta oo Aamiin dhaha.